Enhlonhlweni yaseCrimea idonse njalo izivakashi. Lokhu lula lenqwaba ezikhangayo ukuthi nombala basakaza phezu lonke insimu yalo. Futhi izivakashi ehlobo, yebo, safuna ukuya ogwini. Beautiful ulwandle izivakashi eziningi. Nokho, Ukuminyana ogwini futhi ngezinye izikhathi amanzi anodaka akusho neqhaza ukuphumula ukhululekile, futhi kubangele imizwa engakhi beachgoers.
Indlela yokwenza uhambo lwakho kangcono?
Wonke umuntu uyaqonda ukuthi awukwazi nje afike olwandle olunothile, niphumule kahle, hhayi ngenkathi senza umzamo ukuhamba ukuhlela. Ingabe kufanele ukuthola indawo yokuhlala, ukucabanga hambo kanye nemizila ukuthi ungathatha uhambo ezikhangayo.
White isihlabathi amabhishi sidonsele abantu uphumule ebhishi futhi bethamele ilanga. Sula amanzi ikuvumela ukuba ngena futhi bathole ubuhle emhlabeni ngaphansi kwamanzi. Futhi eseduze has ezihehayo ukuthi bayakufanelekela ababevakashile. is it Umiswe kuphi?
Likuphi kolwandle ehlanzeke eCrimea?
Njengoba sishilo, ngisho ngaphambi kokufika enhlonhlweni kungaba umqondo omuhle ukuthi ucabange ngalokhu indawo yokuphumula. Phela, kuyoba nzima, eseke ukuthola lapho ulwandle ehlanzeke eCrimea. Ngakho, ngokombono, indawo engcono ungathola, uma uvakashela Olenevka eCape Tarkhankut. Ake sibheke-ke kabanzi.
Cape Tarkhankut isendaweni akulona ethandwa kakhulu phakathi iningi izivakashi agudle ugu olusentshonalanga ye enhlonhlweni yaseCrimea. Yingakho lapha ungasathola imvelo isetshenzwe. Kuphela kule ndawo ezibekwe ezingavamile ngenxa enhlonhlweni isihlabathi ogwini olunesihlabathi esimhlophe.
Ngokwe Izibuyekezo kule coast ungakwazi ukubuka ukushona kwelanga njalo kusihlwa, ukubukela ilanga singena ihlanzekile ngokuphelele, umkhathi blue kolwandle. Ngaphezu kwalokho, ngokungafani kuya amabhishi evamile eCape Tarkhankut kukhona inqwaba amaphuzu yedivayisi yokuthengisa ukudla emgwaqweni futhi eziyisikhumbuzo. Lona lapho ungakwazi ukuphumuza ingqondo, hhayi ukulalela ukukhala barkers futhi egxilile esimweni esinokuthula indawo emangalisayo.
Muva nje, mayelana amabhishi engcono eCrimea, elise kude ethandwa oluseningizimu, akekho owayazi. Kodwa muva nje ugu oluncane Olenevka (Cape Tarkhankut), beba kuthandwa, futhi emzaneni uqobo uguqulwe resort yedolobha lanamuhla. Ngenxa remoteness zokulala ethandwa kakhulu futhi emangalisayo ulwandle obala at the ogwini wendawo bazinza abathanda ongaphandle.
Abatshuzi ethunyelwe lapho ulwandle ehlanzeke eCrimea, ngenxa yomhlaba ocebile kwamanzi ngaphansi kolwandle amanzi olwandle ahlanzekile. Eduze lolwandle kukhona amaphuzu amaningana sokuqasha noma asebenzise imishini ethize. Ngaphezu kwalokho ukuqasha, ungakwazi oda nomqeqeshi ngubani uyofundisa saqala bagxuma ngokuphepha kanye nabathile abanolwazi kuzothatha izindawo ezikhanga kakhulu futhi engavamile ukuba diving.
Abathandi kitesurfing futhi windsurfing abe akwazi ukuthola abafundisi sokuqasha imishini kulo mdlalo.
Skating phezu kolwandle efudumele ngemuva isikebhe noma kite icala imizwa ezinhle unyaka wonke. Futhi kuba ephephile ngenxa inombolo encane yabantu. Ogwini kungukuthi aminyene, ngakho amaholide ukubhukuda kuphela ezindaweni eziqokiwe, futhi akusho abayithandi futhi ungazizwa isidingo ukubhukuda lapho awukwazi. Kuba lula kakhulu ukuthola kude nasolwandle, lapho abekho abantu ukugeza.
izivakashi Active ukutshela lapho ulwandle ehlanzeke eCrimea. Izibuyekezo eCape Tarhankut kwesokunxele abalandeli emidlalweni eyingozi, abavakashi ezindaweni ezithakazelisayo.
Remote uhambo emzaneni
Inani elikhulu izindawo amahle, elise ukuqhela emzaneni, yenza ethandwa futhi ngebhayisikili. Noma ubani angakwazi ukuqasha ibhayisikili uhambe ujabulele uhlobo okuthiwa Cape.
Uma izivakashi unesithakazelo imisebenzi yangaphandle, umbuzo lapho engcono ukuya eholidini eCrimea, isixazululekile ngokwalo, ngoba wonke umuntu owafika Olenevka Ungazama omunye wemizi eminingi adventure nemidlalo. Abafundisi ubambe ingxoxo ukuphepha ukuvimbela izingozi.
Ngezinye Cape Tarkhankut, ngokubona, hhayi kuphela wahlela emabhishi best eCrimea, kodwa futhi ezikhangayo eziningana ezithakazelisayo ukuvakashela. Mhlawumbe owayevelele kubo iyona yesibani enamandla kakhulu elikhonza lokuma sogu lolwandle futhi somhlaba. Yakhiwa eminyakeni engaphezu kwamakhulu amabili edlule, futhi phakathi naleso sikhathi ukulungiswa yezimonyo kuphela kwenziwe kuyo. Museum muva ovuliwe amahange. Ulindele ukuba izivakashi yayo.
Omunye izinto eziyinqaba of mono futhi ngokuthi "Alley yabaholi" itholakala ngaphansi ikholomu amanzi lapho ulwandle ehlanzeke eCrimea. Lokhu igalari esandayo busts yabaholi lamaKhomanisi. Itholakala amamitha 70 kusukela ogwini bese kule ndawo, ungakwazi kuphela usebenzisa ukuntweza igiya.
Esikhathini ingxenye endala izindlu itholakala Olenevka Jikelele Popov. Lokhu kwethulwa Prince Potemkin ekhulwini le-18, ngesikhathi esifanayo, indlu Manor lakhiwa. Okwamanje it is elibuyiselwe itholakala ensimini ka omunye zokungcebeleka.
Kufanele futhi ishiwo ezikhangayo zemvelo. Kutholwe eseningizimu nje Olenevka amawa, ezinde phezu kwamanzi 6-10 m. Ngokusebenzisa amanzi ke ungabona phansi. Kulezi zindawo ezinhle amamuvi ambalwa abadumile okudalwe. Enyakatho emzaneni akuzona emadwaleni okusezingeni eliphezulu, kodwa ukuthatheka main lapha esiqiwini "Dzhangul", unika izivakashi kungenzeka ukuze anakekele ekamu etendeni.
Ngasiphi isikhathi esizayo, na?
Isikhathi esingcono ukuvakashela lezi amabhishi isihlabathi esimhlophe ubhekwa ekuqaleni September. Ekwindla masinya Cape Tarkhankut ingekho velvet isizini, kokubili esogwini oluseningizimu, njengoba azikho amatshe, ukuqongelela ukushisa ehlobo. Ngakho-ke, ngalesi sikhathi kukhona cishe ushiyiwe futhi Olenevka liphenduka indawo ephelele ikhefu kubantu abavamile, futhi abaningi bakhathele umsindo befuna izivakashi ukusebenza. Kukhona ahlale enkulu uma ufuna elinokuthula. Kodwa ngesikhathi esifanayo inqwaba hambo aphakanyisiwe nokuzijabulisa ngeke uthole nesithukuthezi ngisho spoilt kakhulu ababuki bamazwe engavamile zokungcebeleka.
Kanjani ukuze uthole Olenevka?
Ukuze bafike kulesi ipharadesi ebhishi, kufanele uthole endaweni ngemoto. Uma une ukuya ngemoto ke inkinga isixazululekile impela nje: kubalulekile kuphela ukusebenzisa itilosi noma silibangise entshonalanga, kulandela izimpawu. Kodwa ngokuvamile abantu beze lapha isitimela noma ibhanoyi.
Kulokhu, ukusuka Simferopol ukuba Ukufakelwa, ngoba ibhasi umphakathi ukuba Olenevka okwamanje. Okokuqala, kudingeka uthole ngaya edolobheni. I Black Sea, futhi ukusuka lapho saya Olenevka. Amabhasi ukusebenzisa njalo ngehora isigamu, nobude endleleni evela oLwandle Olumnyama ukuze Olenevka kuyinto 22 amakhilomitha.
Ungase futhi uthole kusuka Yalta, lapho esiteshini sesitimela, kodwa akukho sezindiza. Lo muzi ibhasi ngqo endaweni lapho ulwandle elicwengekileyo eCrimea. Kokuthunyelwa Shuttle ezokuthutha kusukela esiteshini sebhasi elise amamitha 100 kusukela esiteshini sesitimela. Ubude 90 km kanti isikhathi sokuhamba ka mayelana 2 h.
abahambi ongumpetha belulekwa ukuba akhethe uphumule kule ndawo ongavamile nature enhle, abantu abambalwa futhi tinike ematfuba lamanyenti yokuchitha isizungu ezithakazelisayo futhi zihlukahlukene.
Lapho ungakwazi ukubhukuda nge amahlengethwa eMoscow?
Indlela ukudala iphuzu Wi-Fi ukufinyelela
Ingabe i-Atkins idla ngokuphumelelayo? Ukubuyekeza